Inani Lokuhlolwa Kwamawebhusayithi kwamahhala | Martech Zone
NgoLwesithathu, Juni 13, 2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
Le yinkulumompikiswano eqhubeka nokufutheka uma kukhulunywa nge-Intanethi… kungani kufanele ngikhokhele isisombululo lapho ngingasebenzisa esamahhala? Sisebenzisa izinhlelo eziningi zamahhala - kepha uma sinikezwe ulwazi lwethu embonini, ngicabanga ukuthi sihlukile kulo mthetho. Njengenhlangano, sisebenzisa ngokuphelele ubuchwepheshe esibuthola bulusizo futhi sibusebenzisa ukuze sisize amakhasimende ethu.
Izikhathi eziningi kakhulu sibona amakhasimende ethu esebenzisa izixazululo zamahhala futhi awanalo ulwazi lokulisebenzisa noma ukuqonda umthelela ongaba nawo emizamweni yabo yonke yezentengiso. Kulokhu, abantu ku I-Maxymiser wenze ukuhlaziywa kokuhlolwa kwewebhusayithi okukhokhelwe nokukhokhelwa kwamahhala futhi kutholakale ukuthi amakhasimende ahlolwa ngokukhokhelwa anemiphumela emihle angama-600%. Lokho akumele kusimangaze, noma kunjalo. Ipulatifomu enhle ngokujwayelekile inabachwepheshe abasiza wena ukushayela imiphumela usebenzisa ipulatifomu yabo. Ngamanye amagama, kuyintando yabo ukuqinisekisa ukuthi usebenzisa uhlelo lwabo ngokugcwele ukuze uthole inzuzo enkulu ekutshalweni kwemali. Isicelo samahhala asinikezi lokho!
Tags: ukuhlolwaukuhlolwa kwamahhalaumagazineintengobuyela kutshalomalitestingukuhlolwa kwewebhusayithi
Imikhuba Yangaphambilini Yokuthenga Yabathengi